IZINHLEKELE ZE-LITterATURE - T TEL RELAY
Imibhalo: izindaba ezine zase-Afrika okufanele zifundwe,
Yize kunamafinyela ambalwa aphindaphindayo, izincwadi zezingane ezinikelwe i-Afrika ziyazibuyisela ngokwazo: zivusa umcabango ngenkathi zikhuluma ngobumbano nokuvikelwa kwemvelo. Akukaze kusheshe kakhulu ukungena ku ...
Lezi zinkulumo zomlando eziyishumi nanhlanu eziphawule i-Afrika ezimele
Tchinde Septhemba 9, 2020 0
Lumumba, Houphouët, Keïta, Senghor, Mba, Ahidjo… Ngo-1960, abaholi base-Afrika babeshintshana enkundleni ukuze bamemezele inkululeko yamazwe abo. Ngokuhlonishwa noma ngokulwa, lezi zinkulumo zehle emlandweni. I-Lyric noma ...
IGibhithe i-Alaa El Aswany lisabalalisa imibandela yokusetha nokugcina amasistimu ...
U-Alaa El Aswany waseGibhithe usabalalisa ukuxhumana okuxakile phakathi "kwesakhamuzi esilungile" kanye nomashiqela ku "Le Syndrome de la dictatorship", umbhali wamanoveli waseGibhithe u-Alaa El Aswany uhlalula imibandela yokusungula nokunakekela…
U-Agatha Christie ubhekene nokugxekwa yinoveli yakhe ethi "Izimbadlwana eziyishumi"
Inoveli ephumelelayo ethi "Dix petits nègres" yiBritish Agatha Christie ishintsha isihloko sayo ngesiFulentshi. Ukunemba kwezombusazwe nemiphumela yokubumbana kwe-Black Lives Matter ukunyakaza kube lapho. "Singakuhleka konke kodwa hhayi ...
ISenegal: "Ukuphinda ukwazi ngomlando", ama-25 avela ku-General History ye…
Tchinde Agasti 27, 2020 0
Imiqulu engama-25 kumlando Jikelele weSenegal kusuka ku-Prehistory kuze kube namuhla. Le yiprojekthi ye-titanic futhi engakaze ibonwe lapho amaqembu abalobi bezomlando, abaprofesa nabaphenyi bebelokhu besebenza khona kusukela ngo-2013. Imihlanu imiqondo yokuqala…
Ngokusebenzisa i- "Sublime Realm", umlobi u-Yaa Gyasi uqokomisa umbuzo onameva ...
Ngemuva kokuphumelela kwe- "Alikho ikhaya", indaba ethatha izizukulwane eziyisikhombisa, i-Yaa Gyasi inyathelisa "i-Sublime Realm". Ngokugxila ebudlelwaneni bomndeni, kulokhu esendlini kamama nendodakazi evaliwe phakathi kweGhana ne-United States. "Umndeni ...
UWalter Rodney, impilo ezinikele kwiPan-Africanism kanye nokulwa nobukoloni
Tchinde Agasti 22, 2020 0
Isiphetho sobunye ukwedlula lesi somlobi waseGuyanese. Umlobi wemisebenzi enikelwe ezwenikazi lase-Afrika, ubugqila kanye nokwenziwa amakoloni, waphupha izwe lakhe, ngobumbano besigaba obezodlulisa ukwahlukana kobuzwe.
Izincwadi: "EVERLASTING" ngomphumela wokucwaninga kwezenhlalo ngokuziphatha ...
Tchinde Agasti 18, 2020 0
Bathandekayo BONKE, ngilethula kini "NGOKUPHELELEYO", inoveli entsha enesise umkhondo wethu wezincwadi. "UKUZE NGOKUPHELELE" kuwukufinyeleleka kwesifundo sokuhlalisana kwabantu ngokuziphatha kokwehlukahlukana kwama-Afrika lapho umbhali ...
UBoza: Usizi lwabokufika ngokungemthetho encwadini
Tchinde Agasti 11, 2020 0
IBhoza igama lale msebenzi. Ngakho-ke, ukubhala le ndaba, u-Ulrich osemncane waseCameroica oneminyaka engu-16 wakwazi ukubheka usizo lwalowo owamphatha u-Etienne Longueville. Kwakungo-Okthoba 2017 lapho u-Ulrich no-Etienne bahlangana, ...
Umklomelo kaNobel for Literature, iWole Soyinka yaseNigeria, awuhambelani nemodi ye…
Ngemuva kwesithangami esijwayelekile sabafundi base-Afrika mayelana nobhubhane lwe-coronavirus, inkundla lapho bebebize khona izinhloko zamazwe ase-Afrika ukuba zibuse ngozwela nokubona le nkinga njengethuba ...